နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သို့ ဥရောပနိုင်ငံများသို့ တရားဝင်ခရီးစဉ်သွားရောက်ခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာ | Myanmar President Office
၁။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၁-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၉-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ ဥရောပသမဂ္ဂဌာနချုပ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၊ အီတလီနိုင်ငံ၊ ဗာတီကန်မြို့ပြနိုင်ငံနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံများသို့ တရားဝင်ခရီးစဉ် သွားရောက်ခဲ့ပြီး ၁၀-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက်၁၁နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
၂။ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့၌ ရောက်ရှိနေစဉ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ၂-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဘုရင်မင်းမြတ် His Majesty King Philippe ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်Mr. Charles Michel တို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာ-ဘယ်လ်ဂျီယံ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ အရည်အသွေး မြှင့်တင်ရေးနှင့်ရေအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲရေးအတွက် အကူအညီပေးရေး ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံက အကူအညီပေးရေးကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၃။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ဥရောပကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ Mr.Donald Tusk နှင့် နေ့လယ်ပိုင်း တွင်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် လုံခြုံရေးရာမူဝါဒအကြီးအကဲနှင့် ဥရောပကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mrs.Federica Mogherini တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် အလုပ်သဘော နေ့လယ်စာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲများအတွင်း မြန်မာ-ဥရောပသမဂ္ဂ ဆက်ဆံရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး၊ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ၌ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲများအား ကျော်လွှားအောင်မြင်မှု ရရှိရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒုတိယအကြိမ် (၂၁)ရာစုပင်လုံကျင်းပမည့်ကိစ္စ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမြှင့် တင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာကိစ္စရပ်များ၊ အာဆီယံအီးယူဆက်ဆံရေးမြှင့်တင်ရေးကိစ္စ၊ အာရှ-ဥရောပဆွေးနွေးပွဲ(ASEM) နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် Mrs.Federica Mogherini တို့သည် ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မီဒီယာများ၏ မေးမြန်းမှုများကို ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ကြပါသည်။
၄။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် အီတလီသမ္မတနိုင်ငံသို့ တရားဝင်ခရီးစဉ်အဖြစ် ၃-၅-၂၀၁၇ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အီတလီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Mr.Romano Prodi၊ အီတလီ-မြန်မာအသင်း (Italia-Birmania Insieme) ၏ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Vincenzo တို့အား သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၌ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စ ရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၅။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ၃-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် အီတလီသမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Mr.Angelino Alfano အား တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ၄-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် အီတလီနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Mr.Paolo Gentiloni နှင့် နှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲများ၌ မြန်မာ-အီတလီ နှစ်နိုင်ငံအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေးကိစ္စ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတိုးမြှင့်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆောင်ရွက်နေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အကောင်အထည်ဖော်မှုကိစ္စရပ်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် အီတလီနိုင်ငံမှ ဆက်လက်ထောက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်များအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် အဆင့် မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် အီတလီနိုင်ငံမှ အကူအညီများပေးအပ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။
၆။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၄-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဗာတီကန် နန်းတော်၌ ခရစ်ယာန်သာသနာပိုင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး His Holiness Pope Francis အား သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် ဗာတီကန် မြို့ပြနိုင်ငံ (Holi See) တို့အကြား သံတမန်အဆက်အသွယ် ထူထောင်သည့် ကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန် ခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ဗာတီကန်မြို့ပြနိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲ His Eminence Cardinal Pietro Parollin နှင့်တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဗာတီကန်မြို့ပြနိုင်ငံ တို့အကြား သံတမန်အဆက်အသွယ် ထူထောင်နိုင်ခြင်းအတွက် ဝမ်းမြောက်ကြောင်းဖြင့် ဆွေးနွေးပြောကြား ခဲ့ကြပါ သည်။
၇။ ဗာတီကန်မြို့ပြနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂတွင် လေ့လာသူအဆင့်အတန်းရရှိထားသည့် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် ဆိုင်သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၀ ကျော်နှင့် သံတမန် ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ် ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် ဗာတီကန်မြို့ပြ နိုင်ငံတို့အကြား သံတမန်ဆက်သွယ်မှုထူထောင်ရန် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ စတုတ္ထပုံမှန် အစည်းအဝေးမှ ၁၀-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြု ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်မှ သံရုံးအဆင့်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဗာတီကန်မြို့ပြနိုင်ငံဘက်မှ ခရစ်ယာန် သာသနာပိုင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးအဆင့်ဖြင့်လည်းကောင်း သံတမန်အဆက်အသွယ် ထူထောင် ရန် နှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဗာတီကန်မြို့ပြနိုင်ငံအတွက် ဩစတြီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးမှတစ်ဆင့် တွဲဖက်တာဝန်ယူရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၈။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရောမမြို့ရှိ အီတလီအောက်လွှတ်တော်၌ Migration and Gender Equality ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်အမတ်များ ညီလာခံ၏ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ အထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ် တက်ရောက်ပြီး အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ အီတလီသမ္မတနိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Hon.Laura Boldrini နှင့် အီတလီသမ္မတ နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Mr. Paolo Gentiloni တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
၉။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ တရားဝင် ခရီးစဉ်အဖြစ် ၄-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၅-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဝေလမင်းသား Prince Charles နှင့် ကြင်ရာတော်တို့အား လန်ဒန်မြို့ရှိ Clarence House ၌ ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံ၍ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဒုတိယမြောက် အဲလစ်ဇဘက် ဘုရင်မကြီးက မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား Buckingham နန်းတော်၌ တည်ခင်း ဧည့်ခံသည့် နေ့လယ်စာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
၁၀။ ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆေးပညာ သင်ကြားမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးမှုများပြုလုပ်ပေးနေသည့် St. Mary’s Hospital သို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး ညနေပိုင်းတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဓနသဟာယရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး the Rt. Hon. Boris Johnson မှ လန်ဒန်မြို့ရှိ ၎င်း၏နေအိမ် Carlton Gardens ၌ တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
၁၁။ အဆိုပါ ညစာစားပွဲ၌ နှစ်ဖက်အကြား မြန်မာ-ဗြိတိန်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်း ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးသွားရေး စသည့်ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၁၂။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ၈-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် လန်ဒန်မြို့ရှိ Guild Hall ၌ ကျင်းပသည့် လန်ဒန်မြို့တော်မှ ပေးအပ်သည့် Honorary Freedom of the City of London Award ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်၍ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုကိုလက်ခံရယူပြီး ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် လန်ဒန်မြို့ ခေတ္တမြို့တော်ဝန် Anderman Sir Alan Rarrow က တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာ စားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ယခုချီးမြှင့်သည့် Honorary Freedom of the City of London Award မှာ လန်ဒန်မြို့တော်မှ ပေးအပ်သည့် အဆင့်အမြင့်ဆုံး ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အား မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လွတ်လပ်မှုနှင့် ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ထွန်းရေးအတွက် အကြမ်းမဖက်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး စင်မြင့်တွင် ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သော ခေါင်းဆောင်မှုတို့အတွက် ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါဆုကို ယခင်က ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မစ္စစ်မာဂရက်သက်ချာ၊ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ သမ္မတဟောင်း မစ္စတာ နယ်လ်ဆင် မင်ဒဲလား၊ သိပ္ပံပညာရှင် ပါမောက္ခစတီဗင်ဟော့ကင်းနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဝေလမင်းသမီး ဒိုင်ယာနာတို့ အားလည်း ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။
၁၃။ လန်ဒန်မြို့၌ရှိနေစဉ် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ၈-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး Sir Michael Fallon MP နှင့်လည်းကောင်း၊ ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဓနသဟာယ ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပါလီမန်ဆိုင်ရာ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Alok Sharma နှင့်လည်းကောင်း၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Rory Steward MP နှင့်လည်းကောင်း သီးခြားစီ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲများ၌ နှစ်ဖက်အကြား မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ် ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှု၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်မှုသင်တန်းများပေးအပ်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာ-ဗြိတိန်နှစ်နိုင်ငံ အကြား ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် စသည့်ကဏ္ဍများ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးစသည့် ကိစ္စရပ်များအပေါ် ဆွေးနွေးအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြ ပါသည်။
၁၄။ ၉-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် လန်ဒန်မြို့ရှိ Landmark Hotel ၌ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၏ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၁ ခုနှစ် နှစ်သစ်ကူး နှုတ်ခွန်းဆက်စကား
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်၊ ၁၅ / ၂၀၁၉